Ujeedada horn - Horn Future
Asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatu dhamaan akhristayaasha sharafta iyo qiimaha badan ee naga soo booqda degmada iyo daafaha dunida.
Salaan kadib waxa aan jeclaan lahayn marka hore bal waxoogaa inaan akhristayaasha u iftiimino waxa nagu kalifay iyo ujeedada aan u samaynay website kan.
Sida aad wada ogtihiin dunidan maanta aan ku nool nahay waxa ka jira isbadil aad u baaxad wayn oo saamayn wayn ku le nolosha qofka,bulshada ama wadan ku nool.Isabdilkani waa mid lama huraan ah in nimba kaalinta uu ka gali karo uu qaato doorka ka khuseeya isaga.
Hadaba is badiladan waxa kamid ah harow-umarka dunida ka socda ee aadka u balaadhan gaar ahaan technology yada si xowliga uugu faafaysa dunida ee uu kamid yahay internetka oo noqday mid maanta dunida oo dhan inta badan laga isticmaalo.
Isticmaalka internet ka ee sida xowliga looga isticmaalo dunida waxa uu xambaar sanyahay war bixino faa’iidooyin badan le oo dhinac walba taabanaya, oo ay kamid yihiin,technology ga, caafimaad ka,science ka, dawada,dhaqaalaha iyo ganacsiga ,warar ka iwm.
Sidaa daraadeed markaan aragnay isbadiladan aadka uu baaxada wayn ayay nagu dhalatay fikrada ah in la sameeyo website kan oo aan is nidhi fursadahan qaaliga ah uuga faa’iido bulshadiina.
Waxaan eebe(SXW) ka rajaynaynaa in hadafkayaga uu ka dhigo mid wanaag u le aduun iyo aakhira ba waxa sido kale aan ilaahay kamagan galay in uu ka dhigo camal kayagan mid istus tus ah oo uu ka dhigo mid badhax tiran oo isagu aan uugu dhawaanayno.
Marka hore waxaan jecelnahay in aan ka wargalino bulshada in website kani uu yahay dhex dhexaad ah, madaxbaan oo cidna aanan la jirin laakiin runta la jira.
Xiligan aan ku jirin aad bay u adag tahay in qofku dhex dhexaad noqdo xaqiiqada jirtana ka hadlo,sabab too ah waxa jirta in dhinac yada uu khuseeyo arinka laga hadlayo ay cajabin waydo, sidaa daraadeedna qofku dhibaato kala kulmo howshiisa sida marar badan dhacda.
Dhinac kale waxa kale oon jecelnahay inaan cadayno in website kani aanan loo furin sidii cid kale loola tartami lahaa ee kaliya ay tahay sidii bulshada wixii karaankeena aan uugu soo biirin lahayn wax kasta oo ay faa’iido uugu jirto.
Hadaba badh tilmaameed kayagu waxa uu noqon doonaa mid ku wajahan wax kaste oo bulshada anfacaya if iyo aakhira ba gaar ahaan waxa aan xooga saari doonaa sidii aan uugu soo tabin lahayn wax yaabaha la xidhiidha caafimaadka ,waxbarashada,ganacsiga iyo dhaqaalaha, haraw-umarka,technology ga,science ka iwm, hadii eebeha awooda lihi uu ogolaado.Waxa aanan sido kale ka maqnaan doonin wararka la xidhiidha siyaasada tan degmada iyo dunida ba.
Bulshadeena oo iyadu afaf kale taqaana (bilingual) ah waxa aan samaynay qaybo aan uugu tala galnay inaan kusoo daabacno afafka Fransiiska iyo Ingriis ka oo dadka intii doonaysi ay ka akhrisan doonto wixii warar ah.
Waxa sido kale aan samaynay qayb gaar ah oo aan uugu talagalnay in qoraagu wax ku qoro,iayda oo aan soo dhawaynayno qoraalada ku qoran afafka kala duwan,sida Soomaaliga ,Carabiga,Fransiiska iyo Ingriiska.
Waxa aan soo dhawayanaa dhamaan qoraalada kusaabsan mowduucyada kala duwan ee khuseeya arimaha diinta iyo bulshada,waxbarashada,siyaasada ,dhaqaalaha iyo ganacisga,siyaasada iwm. Hadii qoraagu rabo in sawirkiisa la raaciyo maqaalkiisa waan soo daabacaynaa.
Laakiin waxa aan ka codsanaynaa qoraaga in uunan qoraalkiisu noqon mid uu si gaar ah uugu badh tilmaameedsanayo shakhsi gaar ah,koox iyo qabiil gaar ahaan qoraalada la xidhiidha arimaha siyaasada.
Taas macneheedu maaha inaan xakamaynayno fikirkiisa laakiinse waxa aan uuga jeedna waxa weeye in inuunan qoraalkiisu noqon mid aflagaado iyo anshax xumo xambaarsan oo ku xadgudbayada,shakhsi,koox ama qabiil kasoo abuuri kara fidnad.
Laakiinse waxaan soo dhawaynaynaa oo lagama maar maan ah in qoraagu shakhsiyaadka ummada u haya masuuliyada uu usoo jeediyo talo,tusaale iyo naqdin kusaabsan sida uu wax u maamulo ama u hogaamiyo iyo sida ay isaga uula muuqato arini sida uu ku wanaagsanaan lahaa ama ku qurux badnaan laaha.
Waxa sido kale lagama maar maan ah inaan halkan ku cadayno arimaha ka reeban in lagu soo daabaco website kan oo aan u aragno inay yihiin arimo aad laf dhabar u ah ujeedada loo sameeyay.
Waxa kamid ah ujeedooyinkan in la dhowro qofka,kooxda ama ummada diinteeda iyo cirdigeeda waayo tani waa masuuliyad eebe anaka nagala xisaabtami doono ka hor inta ba’ani adam nala xisaabtamin.
Kolkaa qoraalo xadgudub ku ah dad muslimiin ah oo halkan lagu soo daabaco waxa masuulka ah ilaahay hortiisa maamulka website kan sidaa daraadeed,waxa ka reeban website kan in lagu soo daabaco arimahan soo socda.
.In lagu soo daabaco arimo xadgudub ku diinteena xaniifkaka ah.
.In shakhsi gaar ah lagu xadgudbo.
.In koox gaar ah ama qabiil gaar lagu xadgudbo.
.In warar been abuur ah oo aanan jirin lagu daabaco.
.In lagu daabaco warar fitnad abuuri kara oo isk horkeeni kara qabaa’il,koox ama shakhsiyaad.
Waxa aan isku dayi doonaa hadii eebaha wayni raali ka noqdo inaan ku dadaalno sidii arimahan aan soo sheegnay aan uga dhabayn lahayn sidii aan uuga hortagi lahayn,laakiinse wixii gafaf ah ee naga dhaca oo aanan ula kac noqon doonin aad baan uuga cudur daaranaynaa.Sabab too ah bani’aadam baanhay khalad kuna waa naga dhici karaa oo anbiyada umbuu ilaahay(SXW) macsuumiin ka dhigay.
Gabagabadii waxa aan ku soo gunaanadi hadal kaygan in ay aad muhiim noogu tahay in aan xagiina ka helno( akhristayaasha) sharafta iyo qiimaha badan talooyinkiina,tusaalooyinkiina iyo toosintiina joogtada ah. Waxa aan halkan ka cadaynaynaa in iniga la’aanteed uu website kani wax ba uunan noqon doonin.
Kolkaa waxa aan ku sifayn karnaa in akhristayaashu inay yihiin laf dhabarta website ka oo uu la’aantood isagu noqon karo sidii kaluun biya laga saaray oo kale.
Sidaa daareed in website kani noqdo mid taaba gala ujeedadiisana gaadha waxa ay uu ku xidhan yahay taageeradiina joogtada ah oon rajaynayno inaad hiil iyo hooba nala garab joogi doontaan hadii eebaha wayni ogolaado.
Mar kale waxaan eebe(SXW) ka rajaynaynaa in hadafkayaga uu ka dhigo mid wanaag u le aduun iyo aakhira ba, waxa sido kale aan ilaahay kamagan galay in uu ka dhigo camal kayagan mid istus tus ah oo uu ka dhigo mid badhax tiran oo isagu aan uugu dhawaanayno.Waxa kale oon ilaahay ka baryaynaa in howshan culus een hayno uu nagu garab galo,bulshadeenuna ay ke hesho wax kasta oo khair dhamaantii ku jiro inshsa laah, aamiin.